अख्तियारः २०७५ मा भ्रष्टाचारको आरोपमा को-को परे ? - Everest Dainik - News from Nepal
अख्तियारः २०७५ मा भ्रष्टाचारको आरोपमा को-को परे ?
काठमाडौं,बैशाख ०२ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग २०७५ मा आक्रामक रह्यो। तर वर्षको अन्त्यअन्त्यतिर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको संस्थाका पदाधिकारी नै ‘घुसकाण्ड’मा मुछिए। यो घटनाले भने अख्तियारको छविलाई धमिल्याउन खोज्यो।
२०७५ फागुन ३ गतेः जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका प्रशासकीय अधिकृत कैलाश मातक्षे श्रेष्ठ लेनदेनसम्बन्धी उजुरी मिलाइदिने बहानामा २५ हजार घुससहित पक्राउ । यो समाचार अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट लिइएको हो ।
ट्याग्स: akthiyar anusandhan ayog